Britain Yokurudzira Zimbabwe Kuita Ongororo kwaMarange
Nyamavhuvhu 09, 2011
BBC inoti kune mabhesi maviri ari kushandiswa mukutocha vanhu kwaMarange
Hurumende yeBritain iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite ongororo yezvakabuda muchirongwa cheBBC Panorama neMuvhuro.
BBC yakabudisa nyaya yekuti kwaMarange kune nzvimbo dziri kutocherwa vanhu dziri kushandiswa nemasoja nemapurisa senzira yekuranga vanhu vanenge vaenda kunochera mangoda zvisiri pamutemo.
Gurukota rinoona nezvedunhu reAfrica mu Britain, Va Henry Bellingham, vati nyika yavo inoshoropodza zvikuru zviri kuitika kwaMarange, vachiti zvinofanira kuongororwa zviri pachena.
BBC inoti kune mabhesi maviri rimwe rinonzi Diamond Base ari kushandiswa mukutocha vanhu, madzimai achibatwa chibharo nezvimwe zvakadaro.
Gurukota rezvemigodhi, Va Obert Mpofu, vati zviri kutaurwa ne BBC ndezvemugotsi matsuro nekuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.
Vati BBC iri kushandiswa nehurumende yayo kukanganisa zviri kuitika kwaMarange. Va Mpofu vatsigirwa nemumiriri weMarange mudare reparamende, Va Sure Mudiwa, ve MDC yaVa Tsvangirai, avo vati vanhu vari kunetsa magadhi emakambani akaita seMbada ari kurumisa vanhu nembwa, kupfuura mombe dzavo dzinenge dzapinda muminda yemangoda.
VaMudiwa vatizve vanhu vekwaMarange chido chavo kuti dai makambani ari kuchera kwaMarange atorawo zvizvarwa zvekwaMarange kuti zvishandemo kwete kungotora vanhu vekunze kana vari kubva kune mamwe matunhu.
Nhengo ye Kimberley Process muZimbabwe, Va Shamiso Mtisi, vatiwo kunyange havo vasiri kushanda nehurumende mubasa rekuongorora kwa Marange, zvinhu hazvina kuipa sezviri kutaurwa ne BBC.
VaMtisi vati nyaya huru kwaMarange pari zvino inyaya yekubviswa kwevanhu zvine chisimba vachiendeswa kupurazi reArda Transau uye kurumiswa kwevanhu nembwa nezvipfuyo zvavo nemagadhi eMbada nemamwe makambani ari kuchera kwaMarange.
Hurukuro naVa Sure Mudiwa